Xog Dheeriya Waa tuma Haya Bint Xuseen” Amiraadda ka baxsatay Imaaraadka Carabta | Baahin Media
Xog Dheeriya Waa tuma Haya Bint Xuseen” Amiraadda ka baxsatay Imaaraadka Carabta
Jul 3, 2019 - jawaab
Dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay warbaahinta reer galbeedka ayaa aad u hadal haysay “baxsashada xaaska Amiirka Dubai, Sheekh Maxamad Bin Raashid Ala Maktum” iyo dacwadda ay gudbisay ee ay ku codsanayso in laga furo Sheekha Imaaraadka Carabta u dhashay.
Amiiradda ayaa la sheegay in horraantii sannadkan ay u baxsatay dalka Jarmalka halkaas oo ay magangelyo weydiisatay, kadibna ay aaday magaalada London oo ay ku leedahay guri weyn.
Image captionAmiirad Haya waxay ka soo jeeddaa boqortooyada Urdun, waxayn ka mid tahay lixda dumarka ah ee uu guursaday Amiirka Dubai
Amiiradda ayaa magangelyo ka dalbatay dalka Jarmalka, balse waxay haatan labadeeda canug kula nooshahay goob qarsoon oo ku taalla magaalada London ee dalka Britain.
Dadaallo lagu soo celinayo
Warbaahinta caalamiga ah qaarkeed ayaa sheegtay in Sheekh Maxamad Bin Rashid iyo Boqorka Imaaraadka Maxamad Bin Zayid ay u safreen Jarmalka, markay halkaas joogtay, si ay Amiirad Haya ugu qanciyaan inay noqoto balse ay ka diidday.
Amiirad Haya ayaa haatan ah 45 jir, waxay wax ku baratay dalka Britain, oo waxay ka soo qalanjebisay Jaamacadda Oxford, oo ah halka ay ka soo baxeen inta badan madaxda Britain iyo dunidaba.
Waxay isku aabe yihiin boqorka haatan ee Urdun, Boqor Cabdalla Bin Al-Xuseen, balse hooyadeed, Boqorad Calya, waxay ku dhimatay shil diyaaradeed oo dhacay 1977.
Haya bint Al-Xuseen waxay sheegtay in dhimashada hooyadeed ka dib ay aad u murugootay, oo ay joojisay inay dadka dhex-gasho, ka dibna aabaheed, Boqor Xuseen, ayaa siiyay Faras, sidaasna waxay ku noqotay qof aad uga hela fardaha iyo tartamada la xiriira.
Sannadkii 2004-ta ayay is guursadeen Amiir Maxamad Bin Raashid, kaddibna waxay noqotay madaxa ururka fardayahannada caalamka, sannadkii 2014-ta ayay xilkaasi iska casishay 8 sano oo ay haysay ka dib.